Masekete nemitengo zvakabatsirwa nekukuvadzwa nehurumende nyowani | Ehupfumi Zvemari
Hurumende nyowani ichave neSpain mumwedzi inotevera inofanirwa kubatsira varimari vadiki nevepakati kuti vagadzirise pavanogadzira zano ravo rekugadzira chikwereti chakaringana uye chakaringana chemwedzi inouya. Zvese zvine chekuita nemakambani uye zvikamu zviripo mumisika yemari. Iko zvichazonyanya kukosha kusarudza sarudzo dziri chengeta mune yakajeka uptrend uye pamusoro pazvose nekwaniso yekuwongorora iyo iri pachena inonakidza.
Nekuti hapana mubvunzo kuti pachave nevanowana rubatsiro uye vakarasikirwa mukuumbwa kwemutungamiriri wenyika. Iko mune mukana wese uripo misiyano mikuru mukuchinja kwemitengo yavo uye izvo zvinogona kukanganisa kwavo kuita kuti kuve kunonakidza kune kwedu pachedu zvido. Nepo kune rimwe divi, hazvigone kukanganwika kuti ichave iri danho rakakurisa rekudyara danho rekuchengetedza kana hwehasha portfolio yemitengo. Zvichienderana neprofile yakapihwa nevashambadzi vadiki nepakati.
Chimwe chiitiko icho chakakosha kukurudzira chiri mumitengo yemari inoshanduka inogona kuita mashandiro ari nani nepfupi mazwi. Kune rimwe divi, pasina kukanganwa kuti iwe unogona kuwana iyo yakatarwa uye yakavimbiswa purofiti gore rega kuburikidza nekugoverwa kwezvikamu kune vagovana. Nekudzoka pane kusevha inosvika 9%, chero chii chinoitika mumisika yequity, mukati nekunze. Saka kuti nenzira iyi, iwe unogona kuve nerunyararo rukuru mukati memakore mashoma anotevera. Mune zano rakakosha chaizvo iro rakanangana nekugadzira saga yekuchengetedza yepakati nepakati refu.
1 Securities dzinokuvadzwa nehurumende
2 Yakanakisa yeIbex 35
3 Iyo yakashata streak yeIbex 35 yakaputswa
Securities dzinokuvadzwa nehurumende
Pakati pehunhu hunonyanya kukanganiswa nekuumbwa kwehurumende nyowani, Ence inomira pamusoro pezvose. Izvi zvinodaro nekuti mukuru wezvematongerwo enyika anogona kureva izvozvo kusava nechokwadi nezvechirimwa chako muPontevedra shingirira kubva zvino zvichienda mberi uye kuti inogona kutovharwa. Nekuderera muchikamu chinotevera chinosvika kusvika ku4% mukuyera. Kana kusvika panguva iyoyo yanga yave iri yeimwe yeakanyanya kukosha kukosha emari yenyika, pamwe nekukoshesa kwegore rose kwakatenderedza 10%.
Imwe yemativi akabatwa zvakanyanya haigone kuve mamwe magetsi. Hazvishamise kuti zvinofanirwa kuyeukwa kuti aya marudzi emakambani anowanzo tungamira kucheka mushure mesarudzo, nekuti mashandiro avo anoenderana zvakanyanya pamutemo. Semhedzisiro yezviito izvi, zvave zvakadaro Iberdrola imwe yeakanyanya kuderera mazuva ano, ichidonhedza padhuze nezvikamu zviviri muzana. Mushure mekunge yakambokunda yakakosha mhinganidzo iyo yaive nayo pamatanho e8 euros pamugove. SaEndesa ane 0,81% uye Red Eléctrica Española ine 0,3%.
Yakanakisa yeIbex 35
Nepo pane izvo zvinopesana, akanakisa ezvehunhu emari yenyika, uye nekupesana nemisungo yese vanga vari vamiririri vebhengi chikamu. Nekuwedzera mukukoshesa kwemitengo yavo nemargins kubvira 1% kusvika 4%. Kusvika padanho rakakura nekuti ivo vanodzikisira kuti iyo PSOE inogona kubvumirana nechibvumirano chehurumende neCs. Asi kusvika padanho rekuti fungidziro idzi dzisinga zadzikise, ivo ndivo vanozonyanya kunetseka kukudziridza kurasikirwa kwakanyanya. Sezvo zvainge zvichitora nzvimbo kutanga kwegore, kuve imwe yemasokisi emasheya akanyanya kurangwa nevamiriri vemari.
Kune rimwe divi, makambani efamasi anga ari mamwe eanonyanya kubatsirwa nekuti anogona kubatsirwa kubva kune mamwe matanho avanogona kutora kubva kumutungamiriri mutsva. Kusvika pakuti yakacherechedzwa kuwedzera kwehuwandu hwekutora, uye neimwe nzira isina kujairika panguva ino. Kunze kwekumwe kufunga kwehunyanzvi hunhu uye pamwe zvakare kubva pakuona kwezvakakosha. Kuve mumwe wemaseketi kwaunofanirwa kugara uchitarisa kubva ikozvino. Nekuti hapana mubvunzo kuti pane mari yakawanda inogadzirwa nemhando idzi dzemasheya.
Iyo yakashata streak yeIbex 35 yakaputswa
Imwe yedata rakaunzwa nezuva rino idzva resarudzo nderekuti mhedzisiro yesarudzo haina kugamuchirwa nekudonha, sezvakaitika mumakore apfuura. Kunyanya, kubvira 1988, kunyangwe chiri chokwadi zvakare kuti kufambira mberi kwayo kwave kuri kwakadzikama kwazvo, kwega zvishoma zvishoma pane iyo poindi poindi. Kunyangwe ivo vangave vanokosheswa nemusika wemasheya mwedzi gare gare uye mune iyo kesi kucheka kwaizogadzirwa izvo zvinogona kuve zvakanyanya kwazvo. Kunyanya kana ichibatanidzwa pamwe neshanduko yemaficha mune makuru maindices ekare kondinendi.
Nepo kune rumwe rutivi, hazvigone kukanganwika kuti zvese zvinoita kunge zviri kufamba nenzira nemaoko akasimba emisika yemari. Mufungo uri kuzadza chikamu chikuru chevashambadzi vadiki nepakati. Kwavari zvakare dzimwe nzira dzezvinangwa izvo zvinogona kubatsira muzvinashawo kuti aite izvi uye izvo hazvisi zvimwe kunze kweizvo zvinopihwa nehunyanzvi midhiya, iyo inosanganisira tekinoroji uye yakakosha ongororo, kurudziro yeakanyanya kukosha nevaichinja, zvese zvepasirese nepasirese, nhau dzakasimbiswa uye zviitiko zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwakanyorwa pamusika wemasheya.
Naizvozvo, kungwarira kwakawanda uye kungwarira paunenge uchiongorora chishandiso ichi chiripo pamambure, sezvo zvingave zvinonakidza kushanyira nekutora chikamu mazviri, asi kana zvasvika pamari yedu, izvo vatyairi vadiki vanofanirwa kuita kuti vapinde mumaoko. yevechokwadi vemusika wemasheya nyanzvi vanozoraira izvo zvinofanirwa kana zvisingaitwe nguva dzese. Mune zvimwe chokwadi izvo hazvina kunge zvakakanganisa zvakanyanya mukufamba pakati pekupa uye kudiwa mukuyerera kwemitengo yemasheya. Kunyanya kana ichibatanidzwa pamwe neshanduko yemaficha mune makuru maindices ekare kondinendi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Masekete nemitengo zvakabatsirwa nekukuvadzwa nehurumende nyowani